FIANJERANA VATO TENY AMPAMARINANA : Olona 7 namoy ny ainy, 8 naratra mafy, trano 3 potika
Loza nahatsiravina no nitranga teny Ampamarinana, ny alin’ny sabotsy 17 febroary lasa teo iny tokony ho tamin’ny 8 ora sy 15 minitra alina tany ho any. Olona miisa fito no nindaosin’ny fahafatesana tamin’izany. 19 février 2018
Araka ny angom-baovao voaray avy tamin’ny Zandarimariam-pirenena dia trano miisa 3 eo Ambanin’Ampamarinana no nianjeran’ny vato be ka ny 2 potika tanteraka, ny iray potika amin’ny ampahany.
Araka ny tatitra voaray ihany dia olona miisa 8 naratra mafy ary efa nalefa notsaboina eny amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavaona etsy Ampefiloha na Hjra, noho ny ratra mafy nahazo azy ireo tamin’io fotoana io.
Razana miisa 5 amin ny 7 kosa no efa voasikotra tao anaty trano rava, araka ny loharanom-baovao voarainay farany teo am-panoratana omaly maraina, ary mbola manao ny fikarohana sy famonjena izay olona mbola mety ho tototra ao ny mpamonjy voina sy ny zandary amin’izao fotoana izao. Manao ny ainy tsy ho zavatra kosa ireo avy ao amin’ny sampana mpamonjy voina mamaky ilay vato be.
Raha tsiahivina dia efa nisy ny tranga niteraka horohoro sy tahotra ho an’ny mponina tahaka izao tamin’ny taona 2015 teny Ambatomaro. Raiki-tahotra araka izany ireo mponina tamin’iny Avaratr’Ankatso sy ny manodidina iny. Voatery napoakan’ny fanjakana mihitsy tamin’izany fotoana ilay vato mandondona nahiana hitera- doza.
Teknisianina maro no niara-niasa sy nifanampy nanala ilay vato. Soa fa tsy nisy ny aina nafoy sy naratra tamin’izany.